Shuruucdii lagu dhaqi jiray Gaadiidka Dalka Soomaaliya oo dib loo soo celinayo – Bandhiga
Shuruucdii lagu dhaqi jiray Gaadiidka Dalka Soomaaliya oo dib loo soo celinayo
Xukuumadda Federalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in ay dib u soo celiso shuruucdii uu lahaa gadiidka dalka oo sidoo kale laga dhaqan gelin doono guud ahaan dalka, taa oo meesha ka baxday tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dalka.
Wasaaradda Gaadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya ayaa soo saartay xeer heer wasiir ah oo loogu talagalay iney ku dhaqmaan gaadiidleyda Soomaaliyeed.
Sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda oo wareysi gaar ah la yeelatay Agaasimaha guud ee wasaaradda Gaadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya, mudane, Cali Gacal Gaaboow ayaa waxa uu sheegay in xeer ka kooban 24 Qodob oo ah sharciyadii uu hore u lahaa Gaadiidka Dalka in dhawaan la dhaqan gelin doono, taa oo meesha ka saareysa nidaam xumi baahsan oo ka dhexjirta kaxeynta gawaarida iyo shuruucda wadooyinka ee waddooyinka dalka.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la mamnuucayo Baabuurta uu Isteerinkoodu yahay dhanka Midig, lana soo celin doono nidaamkii hore Isteerso Bidixda si meesha looga saaro khasaaraha Nafeed iyo hantiyeed ee Shacabka ka soo gaara gawaarida dadweynaha.
Wadooyinka waa weyn ee Magaalada Muqdisho waxaa ka jira ciriiri farabadan iyo shilal ay khasaarada ugu badan ka soo gaarto dadka shacabka ah.